James Byrne – zlkontempo
Tag: James Byrne
James Byrne ရဲ့ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာသုံးသပ်ချက်
Posted on August 8, 2012 | by zlkontempo | LeaveaComment on James Byrne ရဲ့ ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာသုံးသပ်ချက်
အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ အိုကလာဟိုးမားတက္ကသိုလ်ရဲ့ ၂ လတစ်ကြိမ်ထုတ် WLT – World Literature Today မဂ္ဂဇင်းရဲ့ January/February 2012 (Vol. 86, No.1) issue မှာ James Byrne ရဲ့ essay တစ်ပုဒ် ပါရှိတာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ Burmese Poetry: Tectonic Shifts ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအက်ဆေးရဲ့ အကျဉ်းရုံးကတော့ မြန်မာကဗျာသမိုင်းကြောင်းရဲ့ အရွေ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအရွေ့ကတော့ ´ခေတ်စမ်း´။ ပြီး `စာပေသစ်´။ ပြီး `ခေတ်ပေါ်´။ ၂၁ ရာစုအရွေ့ကိုတော့ `Language – oriented / postmodern´ လို့ရေးသား ဖေါ်ပြပြီး အခုဒီအရွေ့ကို ထပ်ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကြည့်ရင် နောက်ထပ်အရွေ့တစ်ခုထွက်ကောင်းထွက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူ့အက်ဆေးရဲ့ နိဂုံးစာပိုဒ်မှာ ဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး ဒီ concluding paragraph ကိုမူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
Zeyar Lynn’s administering of language poetry in Burma is often confused with the term ‘postmodern’, and the hybridization or pulling apart of these two delicate strands could yet bring about the next shift inaseries of movement that have brought Burmese poetry into the twenty – first century. This could be the most exciting shift of all and unwittingly, perhaps, the political arena is not exempt from influencing change in this case. As poetry has taught us throughout history , in many countries, from the Russian moderns to the “Misty” poets of China, the more inventive poetry is in honoring and transforming tradition – while avoiding the political censor –– the more extraordinary it can be.
“(မြန်မာ) ဗမာ (ကဗျာလောက)ထဲ ဇေယျာလင်း တင်သွင်းလိုက်တဲ့ ဘာသာစကားကဗျာကို `ပို့စ်မော်ဒန်´ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးနဲ့ ရောထွေးပြီး နားလည်နေကြတာ (တွေ့ရပါတယ်)။ ဒီသိမ်မွေ့တဲ့ အမျှင် ၂ခုကို ဟိုက်ဘရစ်ဒ်ဖြစ်စေ ၊ သီးသန့်စီ ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဖြစ်စေ၊ (မြန်မာ)ဗမာကဗျာကို ၂၁ရာစုထဲ သယ်ဆောင်လာတဲ့ လှုပ်ရှားမှု အစဉ်ထဲက နောက်ထပ်အရွေ့တစ်ခုထွက်ကောင်းထွက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးအရွေ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ နိုင်ငံရေးလောက (အနေအထား) ကလည်းမရည်ရွယ်ပဲ ဩဇာသက်ရောက်ကောင်းသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ရုရှမော်ဒန်ကဗျာဆရာတွေကအစ တရုတ် `မြူနှင်း´ ဂိုဏ်း ကဗျာဆရာတွေအထိ ၊ တိုင်းပြည်တော်တော်များများမှာ ရှိရင်းစွဲကဗျာအစဉ်အလာရဲ့ ဂုဏ်ကို ထိမ်းလည်းထိမ်းသိမ်းပြီး အသွင်ပြောင်း လဲမှုတွေကိုလည်း တီထွင်ပြုလုပ်လေ ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ နိုင်ငံရေးဆင်ဆာကိုလည်းရှောင်လေ ၊ ကဗျာဟာ ပိုမိုထူးခြားဆန်းပြားလေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ကဗျာဟာ မိမိတို့ကို သွန်သင်လမ်းညွှန်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။”
Posted in Articles, Reviews | Tagged Articles, Contemporary Myanmar Poetry, James Byrne, Reviews
Zeyar LYNN (poet, translator, language instructor; Burma/Myanmar) is the author of more than twenty poetry collections. He is also one of the editors of Poetry World Quarterly. [ more ]
ကစဉ့်ကလျားအလင်း under Poetry
အောင်ခင်မြင့်ရဲ့ ‘ဆွန်းနက်များ’ (၃) under Articles, Notes
အသံ under Poetry
ဖော်ဝေးငှက်များ ပျံသန်းချိန် under Info, Notes
‘ကဗျာဆိုတာ ပြုလုပ်ခြင်း’ ကဗျာစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ under Articles, Poetry, Reviews
Archives Select Month June 2021 (14) May 2021 (19) April 2021 (20) March 2021 (18) February 2021 (6) January 2021 (14) December 2020 (11) November 2020 (4) October 2020 (9) September 2020 (10) August 2020 (10) July 2020 (6) June 2020 (16) May 2020 (8) April 2020 (11) March 2020 (5) February 2020 (4) January 2020 (4) December 2019 (3) November 2019 (5) October 2019 (3) September 2019 (8) August 2019 (7) July 2019 (1) June 2019 (3) May 2019 (4) April 2019 (6) January 2019 (1) August 2018 (4) July 2018 (15) June 2018 (4) May 2018 (13) April 2018 (10) March 2018 (3) February 2018 (11) January 2018 (7) December 2017 (13) November 2017 (16) October 2017 (8) September 2017 (1) August 2017 (3) July 2017 (6) June 2017 (2) May 2017 (1) April 2017 (6) March 2017 (17) February 2017 (16) January 2017 (12) November 2016 (1) September 2016 (1) August 2016 (1) July 2016 (2) May 2016 (1) March 2016 (3) February 2016 (1) September 2015 (1) July 2015 (3) February 2015 (1) November 2014 (1) October 2014 (2) September 2014 (7) May 2014 (1) April 2014 (1) March 2014 (1) January 2014 (3) December 2013 (6) November 2013 (1) September 2013 (1) August 2013 (1) July 2013 (12) June 2013 (2) May 2013 (2) April 2013 (1) March 2013 (1) February 2013 (2) January 2013 (5) December 2012 (3) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (9) July 2012 (3) June 2012 (1) May 2012 (2) April 2012 (4) March 2012 (4) February 2012 (11) January 2012 (3) December 2011 (4) November 2011 (1) September 2011 (1) February 2011 (1) September 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) July 2009 (1) June 2009 (3) May 2009 (2) January 2009 (1) January 2008 (2) October 2007 (1)
Categories Select Category Articles (48) Essay (1) Info (52) Interview (1) News (16) Notes (109) Poetry (455) Prose (12) Reading (5) Reviews (5) Statements (3) UMP (1) Visual/ Concrete (2)
Alvin Pang American Poetry Articles Aung Khin Myint Bei Dao Charles Bernstein Concrete contemporary poetics Did you say poetry English Essay Eugene Dubnov Hsia Yu Info IPNHK jameson fitzpatrick jericho brown karl popper Katie Degentesh Moe Wai News Note Notes Parnassus Poeticity Poetry Poetry Parnassus Poetry Queries Poetry Thoughts Portrait Poems Prose Reading Reviews Sonnets Spring 21 Statement surrealism Talking About Poetry Tomaz Salamun Translation T S Eliot UNESCO Visual World Poetry Day 2021 yan jun
ကဗျာဆိုင်ရာ အတွေးစများ – ၈။ ကဗျာအကြောင်း
မြို့လယ်မှာ တောခြောက်ခံရခြင်းလို ပုံတူ
ကဗျာဆိုင်ရာ အတွေးစများ – ၇။ ကျနော့်အတွက် ကဗျာရေးခြင်း
Jiang Xemin on တရုတ်ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာ ယန်ကျွံ့ Yan Jun
J-13 on ဒီမနက်၊ မှန်ထဲမှာ ကျွန်မဟာ ချေဂွေဗားရားပဲ
htin lin aung on ခေတ်ပြိုင်ကဗျာထဲက ဒေါ့ကယူမင်ထရီစီးကြောင်း
Ei Ei Tun on ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတကာ ကဗျာညများပွဲတော် ၂၀၁၃
lahyaung on ‘ကဗျာဆိုတာ ပြုလုပ်ခြင်း’ ကဗျာစာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍
© 2022 zlkontempo. All Rights Reserved.